Jaamacadaha waawayn oo bixin doona koorsooyin internetka - BBC News Somali
Jaamacadaha waawayn ayaa dhiibi doona koorsooyin shahaadada jaamacadaha oo internetka laga baranayo shanta sano ee soo socota, sida ay sheegtay madaxa Coursera oo bixisa koorsooyin jaamacado internetka lagu barto ee dalka Maraykanka.
Daphne Koller, oo ah madaxa Coursera, oo bixisa waxbarasho internetka lagu dhigto, ayaa sheegay in teknoolajiyada ay jirto laakiin jaamacadaha ay ka walwal sanaayeen sumcadooda.
Ilaa hadda koorsooyinta internetka laga barto ayaa bixinayay shahaadooyin hoose, iyagoo aan bixinayn shahaadooyinka jaamacadaha ee degree-ga.
Prof Koller ayaa sheegtay in waxbarashada interneka ee laga baranayo shahaadada degree-ga ay noqon doonto mid raqiis ah oo qof walba uu helo.
Image caption Professor Daphne Koller ayaa madax ka ah Coursera oo bixisa koorsooyinka jaamacadaha ee internetka laga barto
Coursera oo afar sano ka hor laga aasaasay California ayaa noqotay barta internet-ka ugu wayn ee koorsooyinka internetka laga barto. Waxaa loo yaqaanaa Moocs.
Barta internetka ee Moocs, ayaa waxaa dhigta 20 milyan oo arday oo wax ka barata 145 jaamacadood iyo hay'ado caalamka.
Laakiin koorsooyin badankood ayaa ah koorsooyin waqti gaaban socda oo bixiya shahaadooyin hoose oo aan ahayn degree.
Image caption Hindiya oo doonaysa in malaayiin arday ay jaamacadaha ka qalanjabiso sanad walba waxay u baahan tahay jaamacado internetka laga barto
Prof Koller, oo ka hadlaysay shirka teknoolajiyada waxbarashada oo London lagu qabtay, ayaa sheegay in talaabada labaad ee xigta ee waxbarashada internetka lagu barto, inay tahay in jaamacadaha waawayn ay bixiyaan koorsooyin shahaadada jaamacadaha ee degree-ga.
"Waan hubaa inay dhici doonto, waan la yaabi doonaa hadii aysan dhicin shan sano gudaheed.
"Inay yeelan doonto waxbarasho kaliya iyo inay lahaan doonto guryo ay ardayda dagaan ayaan la hubin."
Prof Koller ayaa sheegtay in teknoolajiyada ay horumartay, laakiin sumcada jaamacada ee la ilaalinayo, oo aan la rabin in laga maarmo jaamacada la imaanayo ee fasalka wax lagu baranayo inay dib u dhigtay horumarka koorsooyinka internetka lagu barto ee jaamacadaha.
"Waxaan u baahanahay inaan fikirkaas aan iska dayno, ma aha teknoolajiyada waxa dib noo dhigay."
Haddii aad rabtid inaad ilaalisid imtixaan laga qaadayo qof meel kale jooga, waxay sheegtay in kaamarada webcam ay tahay mid aad u fiican, oo lagu ilaalin karo qofka imticxaanka samaynaya.